Diyaaradda 757 ayaa goosatay
Diyaaradda 757 ayaa goosatay Bilood 9 2 todobaad ka hor #1494
Diyaaradaha 757 turumbooyinka kamuu muujin diyaaradda gudaha fltsim kaliya inay qof walba ogeysiiyaan
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Henno196, Johnny9, афсаф
Diyaaradda 757 ayaa goosatay Bilood 9 2 todobaad ka hor #1496
Waa maxay jiliyaha? Kaliya inaan dadka ogeysiiyo inaysan la jaan qaadi karin Prepar3D v4, sida lagu sheegay bogga websaydhka.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: fltnut
Diyaaradda 757 ayaa goosatay Bilood 9 2 todobaad ka hor #1499
barnaamijku waa lagu rakibay laakiin marka lagu jiro wltsim ma jiro nooc diyaarad la arki karo
Diyaaradda 757 ayaa goosatay Bilood 8 3 todobaad ka hor #1513
way soo muuqataa wayna fiicantahay!
Diyaaradda 757 ayaa goosatay Bilood 8 3 todobaad ka hor #1514
Ma laga yaabaa inay tahay wax meesha lagagacaabo ah ??????
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: eddom
Diyaaradda 757 ayaa goosatay Bilood 8 2 todobaad ka hor #1515
Mid ka mid ah arrimaha caanka ah ee leh fsx Isticmaalayaashu waa fahamdarrada khaladaadka ah ee soo-dejista, sawirada, habka loo raaco baabuur wadista iyo habka saxda ah ee lagu rakibo feylasha HADDII aan si toos ah loo xerin. Kombiyuutarada oo dhami ma isticmaalaan C: Drive, arrin kale ayaa ah markaad gacanta ku rakibayso maysan ku qaadan fayl leh cinwaanka ama cinwaanka oo ku dhex geli faylka cinwaankaas. diyaarad u duceysa Microsoft Flight Simulator ilaa Simobjects to airplane. Haddii aan sidaa lagu yeelin waxaad ku dambayn doontaa diyaaradda diyaaradda mana muujineyso. Arrin kale ayaa ah sawiro. Kombiyuutarka waad xamili kartaa wax walba haddii, aad ka saarto badhanka furayaasha shaashadda, aad inaad maamusho guddiyada iyo muuqaallada, horumarsan oo guji waxqabadka, uma baahnid dhammaan jiirarkaas hufan, iyo shaashadda wanaagsan. oftes ee shaashadda sidoo kale waa wan, u qaado illaa iyo inta jeer ee loo baahan yahay 10 inta loo baahan yahay, taasi ayaa ku siin doonta wan dheeraad ah. Midda ugu yar waa 1400 waxaana loo dejiyay 144000. Waxaan isticmaalayaa 2007 dual core HP 6000. Waan ka gudubtay kaararkeyga iyo nidaamkeyga, sawiradayda ku jira feylka cfg waxaa loo dejiyay 2048, max, waxay kuxirantahay. Hadda waxaad tahay shaashad, xaaladaas waxaad adeegsanaysaa shaashad weyn oo hd ah oo kumbuyuutar ayaad samayn doontaa hagaajinta, Win10, gal goobaha, oo dejiso cayaaraha waxqabadka sare. Xusuusta ayaa kacsan, gala cfg. U deji sida HIGHMEMFIX = 1 Xaqiiji in safka ugu horeeya badhanka casaanka ah ee garabka bidix korkiisa lagu keydiyo. Si loo ogaado, ka dib markii aad kujirtid sim-ka aad kujirtid barta ciyaarta, samee isbeddelo marka laga reebo dejimaha, mar haddii cfg aadan aheyn sidaas. Waxaan hayaa rayidkayga rayidka ah iyo diyaarado diyaaradeed oo ah 100, dusha sare ee muuqaalka ah kaas oo ah 0 in cfg Ma isticmaali karo daruuraha ilaa aan doono mooyee. Had iyo jeer qaado barta shaashadda isla markaana hoos u orod jiirka dhinaca midigta sare ee qarsoon maxaa yeelay tani waxay sababi doontaa isbadalo. Waxaan haystaa in kabadan 4 milyan oo faylal oo ku saabsan nidaamkan '3.9 gig'. Hada waxaa ugu muhiimsan, iska ilaali inaad computerka kujirto 70 f iyo mid hoose, kuleylka ayaa sababa dhalaalaya. Hubi feylashaaga inaad hubiso inay nidaamsan yihiin. Haddii aad leedahay fs9 nidaamka sababaya arrimaha tooska ah khadka tooska ah una hel AIT, taasi ayaa abaabuli doonta oo dib ugu qori doonta fs9-kaaga Fsx. Booqo C-Aviation.net si aad u hesho waraaqaha si aad u baratid sida loo sameeyo faylka cfg. Waxa kale oo aad ku tegi kartaa khadka tooska ah ee internetka si aad u hesho marinka looga qaado faylalka ku meel gaarka ah ee qarsoon taas oo ah sababta ugu weyn ee fashilka barnaamijka. Xawaaraha kombiyuutarka oo dheeri ah waxaad ka helaysaa kaadhka xusuusta ee USB-ga ah ee gigsyada ugu sarreeya ee aad ka heli karto, ku rakibi karto, geli horumarsan oo u dejiso xawaare, taasi waxay ku siin doontaa dhammaan wanka iyo xawaaraha aad ugu baahan tahay. Waxaan ku jiraa taleefankayga sidaa darteed waxaa jira kaliya wax badan oo aan ka war bixin karo. Marka dambe waxaan koobi ka heli doonaa kumbuyuutarkayga kumbuyuutarrada oo waxaan ku ridi doonaa sawirada si aan kuu tuso waxa aan isku dayayo inaan gudbinayo Semper Fidelis, Wadooyinka Farxadda leh.
Diyaaradda 757 ayaa goosatay 8 bilood 1 toddobaad ka hor #1538
Culaysyo iyo muuqaal BADAN P3Dv4.5 MAGA !!! NC